KFind, fitaovana ilaina hitadiavana rakitra ao anaty Kubuntu | Ubunlog
KFind, fitaovana ilaina hitadiavana rakitra ao anaty Kubuntu anao
Ubuntu dia manana tsiro ofisialy maro sy ny fahafaha-mampiasa desktop na windows manager izay tadiavinay. Mampiasa ny KDE Neon aho izao, fizarana iray avy amin'ny Tetikasa KDE izay mampiasa ny Ubuntu LTS ho toy ny fototra ary avy eo ampian'izy ireo ao amin'ny tetikasa ny birao sy ny programa mifandray aminy.
Ny mpitantana ny rakitra Plasma, Dolphin, dia tena tsara tokoa, raha ny marina dia tsy misy na inona na inona hitsiriritra an'i Nautilus, saingy misy zavatra izay tsy mora araka ny hitantsika ao Nautilus. Andro vitsy lasa izay dia nanomboka nanadio ireo rakitra aho, fanadiovana izay tsy dia mora loatra tamiko fitaovana sasantsasany toa ny mpitety rakitra, tsy mandeha araka ny nantenako azy.Izay no nahitako e Nametraka ny fitaovana KFind aho, fitaovana iray mifanentana tanteraka amin'ny Dolphin sy ny birao Plasma. KFind dia motera fikarohana nohatsaraina izay miasa mahomby. Tsy safidy hafa amin'ny programa izay manondro ny atin'ny kapila mafy ataontsika fa motera fitadiavana rakitra nentim-paharazana, misy safidy maro ary tsy dia haingana satria tsy manana an'io index io izay ananan'ny motera fikarohana hafa.
KFind dia azo apetraka avy amin'ny Discover na avy amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny fitaovana apt. Raha vantany vao apetrakao izy io ary ampandehanintsika dia hiseho ny varavarankely kely misy tabila telo Ny kiheba voalohany nantsoina Anarana / Toerana mampiseho amintsika safidy tsotra sy mahazatra hikarohana rakitra na karazana rakitra. Ny volomaso Ny atiny dia manampy antsika hahita rakitra amin'ny alàlan'ny atiny. Mahaliana indrindra izany rehefa mitady antontan-taratasy isika ary tsy tadidintsika ny lohateny fa ny ao anatiny.
Ny tabilao fahatelo dia antsoina Properties, azontsika atao ny manondro ny daty famoronana, ilay mpampiasa ananan'ny antontan-taratasy, ny haben'ny fisie sns ... Farany, lazao fa tsy atokana ireo takelaka telo ireo fa Ireo telo dia azo atambatra mba hahafahantsika manadio ny fikarohana ary manatsara ny fotoana lanintsika amin'ny fikarohana rakitra. KFind dia fitaovana tena ilaina izay nanampy ahy be dia be ary mety hahomby kokoa noho ny motera fikarohana an'ny mpitantana ny rakitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » KFind, fitaovana ilaina hitadiavana rakitra ao anaty Kubuntu anao
Asterisk, fametrahana ary fananganana ifotony ao amin'ny Ubuntu 18.04
Ny fanamboarana minitra farany dia navoaka tamin'ny fanavaozana Ubuntu 14.04